Otu esi ehichapụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na |dị n'Otu | Site na Linux
Nyaahụ otu enyi kpọrọ m n'ụlọ na ajụjụ a: Olee otu m ga-esi ewepụ ya Akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya en Ịdị n'Otu? Ebe obu na abughi m onye ji Ubuntu na amalitere m ile anya na ihe m hụrụ bụ ihe ndị a.
Ihe ndị a bụ ihe m na-aghọtaghị. Ikekwe nhọrọ ọzọ ga - abụ iji gbanyụọ zeitgeist, ma anyị ga-eme otu ihe ahụ KDE mgbe deactivating Nepomuk+Akonadi na ihe niile dị na desktọọpụ asụsụ.
Ugbu a, ọ na-anọgide na onye ike a launcher na-ebuli usoro a ..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Otu esi ehichapụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na Unitydị n'Otu
Ekwenyere m na ihe dị nkenke kwesịrị ịdị na ndabara, na gnome2 ọ bụ, na LXDE ọ dịkwa. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara iji ghara ịdị n'otu.
Na Xfce ọ dịkwa. Ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa dịka m kwuru. Kedu ihe ị na-eyi mgbe ahụ?
Na Obi ike site na iji Windows ... "ịdị mma nke amaghị nwoke" hehe.
Obi ike jiri obi ọjọọ sụọ ihu gị na mgbidi maka iji Winbug, ndị Taliban nyere iwu.
Kọmputa ahụ na-enye m ịnyịnya ibu iji wụnye Arch na ebe ọ bụ ihe dị, ka anyị hụ ma aja aja chere na ọ bụ ekwekọghị ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara foto m zigara ya
ọ bụrụ na ọ dị na ndabara. Ọ bụrụ na na taabụ 'Dash Home' ị dee 'nzuzo' windo na-egosi site na nke ị nwere ike ihichapụ niile "akụkọ ihe mere eme" nke ịdị n'otu, na ọbụna deactivate nhọrọ "Cheta Arụ Ọrụ"
Daalụ, oge ọ bụla m na-emegharịkwu Ubuntu na m na-atụ uche Windows obere
Daalụ, ọ dị mfe, ọ na-eje ozi m ọtụtụ 🙂
Zaghachi ka gera
Daalụ nke ukwuu!! M nọrọ ogologo oge na-achọ ya na na njedebe ọ dị nnọọ mfe.
Daalụ eziokwu m dị ọhụrụ na Linux ma amaghị otu esi gbanyụọ nhọrọ ahụ.
ka ihe ịga nke ọma dijo
Dị ka mba Naanị ị ga-aga Nhazi usoro, ozugbo ọ bụla ị ga-ahọrọ Nzuzo na ebe ahụ ị ga-ehichapụ akụkọ ihe mere eme na ọ bụ ya.
Ihe m maghị bụ na ọ bụrụ na windo jiri tebụl koodu ASCII rụọ ọrụ na mkpụrụedemede pụrụ iche, olee okpokoro Ubuntu na-eji?
Ihe ndị a bụ ihe m na-aghọtaghị.
Nke ahụ bụ otu n’ime ihe dọtara anya m ebe ọ bụ na m gbalịrị ya tupu oge ọkọchị. Ma kemgbe ahụ enweghi nhọrọ dị mfe. Na Gnome 3 Shell ọ bụ otu. Na njedebe m họọrọ ịghara ịmepụta "n'oge na-adịbeghị anya".
Ọ ga-ezu iji hichapụ ~ / .local / share / adịbeghị anya-used.xbel
nke mere na ọ pụtaghị ọzọ anyị nwere ike ịme ihe aghụghọ nke ịmepụta folda akpọrọ otu nke ga-egbochi ịmepụta faịlụ ọhụrụ
Enwekwara onye njikwa maka Zeitgeist, nke bụ igwe ọhụrụ maka ọrụ ndọtị ndị a: Onye na-arụ Ọrụ Ndekọ Ọrụ ma ọ bụ Zeitgeist Global Privacy
Nhọrọ ọzọ na-eke edemede:
rm $ HOME / .che / ibe / zeitgeist / activity.sqlite
Na menu «faịlụ - chekwaa dị ka» anyị na-akpọ ya dịka ọmụmaatụ «delete_history» na anyị na-echekwa ya na folda nkeonwe.
Ugbu a, anyị na-enye ya ikikere, site na ịpị aka nri na faịlụ ahụ na "Njirimara - ikikere" anyị na - eme ka igbe ahụ dị "Kwe ka emee faịlụ ahụ dịka mmemme"
Arụ Ọrụ Log Manager m ikpe na-arụ ọrụ mgbe ọ na-ele ka ọ…. ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụrụ na ha anọgide na-azụlite ya ọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ. N'akụkụ nke otu Gnome, echere m na e nwere gnome-activity-journal. Nke mbụ emebere nke ọma iji lekọta nzuzo na nke abụọ, iji jikwaa ọrụ gị n'ihu PC.
Zeitgeist dị ezigbo mma, n'ihi na ọ na-edekọ ihe niile… .. Ma mgbe ọ na-abịa ijikwa ya na ịmanye gị ịme ihe…. enweghi uzo ma di nma. A okwu nke (kwa ogologo) oge.
Daalụ maka onyinye ahụ, echere m na ihe karịrị otu n'ime anyị jụrụ onwe anyị ajụjụ a.
Obi abụọ, mbụ ntụziaka deletes faịlụ: "Arụ Ọrụ.sqlite", enwere faịlụ a na akpaghị aka dịka ụdị log? Kpọmkwem ihe iwu ahụ mere: "Zeitgeist-daemon - ebe" ma ọ bụ gịnị ka ọ bụ maka?
zeitgeist-daemon –iwegharia zeitgeist daemon malitegharia ọzọ
Iji kwuo na ha abụghị 100% ụzọ dị irè…. Mgbe ụfọdụ, ha rụụrụ m ọrụ ma oge ụfọdụ ha anaghị arụ ya. Na njedebe m họọrọ nke mbụ nhọrọ, ruo mgbe Arụ Ọrụ Log Manager ma ọ bụ a yiri usoro ihe ọzọ tozuru okè.
ọrụ ọzọ nke echefuru akara ...
Ọ bụghị naanị Mark. Na Gnome Shell enweghị…. Ka anyị ghara ichefu na anyị nọ n’oge mgbanwe na ihe na-efu efu.
Iji nye ihe atụ ọzọ. Na Gnome Shell (ọ bụghị ma ọ bụrụ na ịdị n'otu kwa) ihe nomi / ịkwaga ọganihu na-efu, n'ihi na mgbe idetuo ma ọ bụ bugharịa faịlụ site n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Enwere windo na-egosi nke a, mana ọ bụrụ na ị mepee ọtụtụ ọ dị mfe ileghara ya anya ma ọ bụ chee na oyiri ahụ emechaala. E kwesịrị inwe ụdị ngosipụta na ogwe ahụ. Ma ọ dịghị. Echere m na ị wụnye ihe…. ma achọpụtabeghị m ihe ma.
Nsogbu a bụ na zeitgeist nke na-abịa na Gnome 3 ma ọ ka dị ntakịrị "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ", mana ị nwere ike ịmepụta edemede iji kpochapụ akụkọ ihe mere eme ya ma ghara iji aka ya mee ya site na njedebe.
Ma enwere nhọrọ ka mma nke a na-akpọ Ọrụ Log Manager. Ọ bụ ngwa na-enye gị ohere ijikwa Zeitgeist ka ị nwee ike ihichapụ akụkọ ihe mere eme ya maka oge ma mepụta ndepụta ojii nke nchekwa ị chọghị ịbụ akụkụ nke nchekwa data Zeitgeist.
Oops, echere m na José ekwuola ya. Nke ahụ na-eme m maka ịghara ịgụ ihe niile kwuru. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ehichapụ ihe m kwuru abụọ a iji zere redundancies nke ihe ekwuolarị.
Na mint 12 otu nsogbu… ọ dịghị ihe zuru oke!
Echere m na ihichapụ akụkọ ihe mere eme dị mfe, agbanyeghị na abụghị m ihe ọhụụ ikwu, enwetụbeghị m nke a, naanị m wụnye, chọgharịa ma gbalịa ime ụfọdụ ihe na-enyere m aka.
ihichapụ akụkọ ihe mere eme nke ubuntu 12.04 naanị mee ihe ndị a:
Nhazi usoro / Nzuzo / .. Na aka nri họrọ ihe niile wee pịa ka ihichapụ akụkọ ihe mere eme na voila ..
Na nke a ị na-ehichapụ ihe niile ma ị nwere ike ịkọwapụta ụfọdụ ihe masịrị gị ka m wee nwee ike ịchekwa ma ọ bụ wepụchaa naanị mgbe ị na-apụ.
Ezigbo ozi VICMAS, echetara m na ahụrụ m ihe, ugbu a amatala m! daalụ
You nwekwara ike ịhọrọ "Hichapụ akụkọ ihe mere eme" nke Oge Ikpeazụ, ternyaahụ, Izu gara aga ma ọ bụ Advanced (oge ọ bụla).
Daalụ VICMAS! ezigbo ngwọta.
Vicmas, unu dinara anyi niile na akwa, a na m agbanwe uzo m si hu ihe na idi n'otu (ya bu, na akpachapu ihe niile), Ekele m ...
Na Linux Mint enwere, n'ihe ọmụma m, faịlụ 2 ebe akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ mepere emepe n'oge na-adịbeghị anya, ihe ma ọ bụ faịlụ echekwara. Naanị ihichapụ ma ọ bụ hichapụ ha iji kpochapụ akụkọ ihe mere eme.
1) Site na OpenOffice.org: /home/username/.openoffice.org/3/user/registry/data/org/openoffice/Office/Histories.xcu (folda openoffice.org zoro - ọ nwere akara n'ihu It-).
2) Site na mmemme ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ (gedit, eog -Eye nke GNOME-, evince -Document Viewer-, Totem,…): /home/username/.recently-used.xbel (faịlụ ahụ na-ezo ezo) .
Ọ dị mfe, ọ na-abịa na akụkọ ihe mere eme njikwa, gaa na ịdị n'otu search engine na e kpere «nzuzo» akụrụngwa na e nwere ike hazie niile akụkọ ihe mere eme na nzuzo nke ya. ka mma kọwara ebe a:http://www.youtube.com/watch?v=ucSJt-e5PFU
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na m hụ na ọ dị mfe… .thanks o nyeere m aka nke ukwuu m chere na ọ nweghị ike, ihe na-enweghị ezi ihe ọmụma na-eme ka ị hụ onwe gị na nsogbu t .eke na ekele.
Kedu otu esi ewepu iwu ahụ ka akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya wee pụta ọzọ?
ojii alụlụ dijo
Zaghachi iji ojii
Nnukwu akara ngosi maka KDE Tray